Dhibaatooyinka B773ER sano 3 4 bilood ka hor #294
Haa, waxaan haystaa B773ER Filibiin ugu dambayn halkan, waxaana jira dhibaato la xiriirta hydraulics. Mid ka mid ah nidaamyada, waxay u egtahay mid madhan, oo aan ka ahayn waxa aan sameeyo, waxay sii joogeysaa sidan. Sababtaas awgeed, kaliya waxaan awoodaa inaan kari karo oo jejebiyo dhulka. Wax walba oo kale waxay u muuqdaan caadi, way fiicantahay.
On screen sare ee ECAM, waxaa jira liis ah qaladaadka leh hydraulics. Dhammaantood waxay leeyihiin wax la sameeyo hannaanka hydraulics C, iyo xagga hoose ee ECAM, in mid run ahaantii madhan.
Sidoo kale waxaan heystaa xirmo B772 halkan laga soo qaado, isla VC, laakiin aan lahayn qalad.
Sidaas, hab kasta oo lagu hagaajin karo tan?
Dhibaatooyinka B773ER sano 3 4 bilood ka hor #354
Dab-damisyada dayactirka, iyo helida shaqaale cusub?
Dhamaan murugada dhinac ... nasiib daro ma heysto shimbirahan, sidaa daraadeed ma jiraan wax badan oo aan sameyn karo.
Miyaad aragtay dhammaan albaabbada fursadda?